Isbarbardhiga nolosha batteriga ee iOS 11.3 iyo iOS 11.2.6 | Wararka IPhone
Nacho Aragonés | | macruufka 11
Batariyada Lithium waa mid ka mid ah abuurista la soo rogay. Haatan, dhammaan qalabka aan ku haysto miiskayga waxay isticmaalaan baytariyada lithium. Laga soo bilaabo MacBook-kayga illaa jiirka, iyada oo loo marayo iPhone, samaacadaha dhagaha, iwm.
Laakiin, oo ay weheliyaan baytariyada lithium, su'aasha ayaa timid oo ku saabsan sida loo adeegsado, sida loo dheereeyo iyo in ka sii dheer, waa maxay sababta tan jaahil ka ah hawlgalkeeda.
Apple waxay qaadatay dhibaato adag oo ku saabsan dhibaatooyinka bateriga dhowr bilood ka hor. Dhibaatooyinka aan dhib ahayn, laakiin go'aan keligiis ah oo Apple gaadhay, oo ku xidhan hadba sida aad u eegto, saboolnimada ama hagaajinta isticmaalkeeda maalinlaha ah.
Si loo xalliyo, ama aad u hufnaato waxaas oo dhan, Apple ayaa ugu dambeyntii soo saartay macruufka 11.3 iyo horumarkiisa "Battery Health" muddo dheer la sugayay.. Iyadoo ay weheliso qaybtan cusub ee goobaha, inbadan oo naga mid ah ayaa fileynay in macruufka 11.3 uu la socon doono horumar weyn oo dhanka batteriga ah. Laakiin waxay u muuqataa in tani aysan ahayn kiiska, halkii laga soo horjeeday.
Ka tagida fikradaha shaqsiyadeed ee dadka sheegaya inay hagaajinayaan, dadka sheegaya inay cunaan qarash badan hadda, ragga iAppleBytes ayaa dhajiyay fiidiyowga aan wada dooneynay. Shan iPhone oo leh iOS 11.2.6, oo sameeya koox iyaga xakameysa oo leh iOS 11.3, si loo arko, tijaabada batteriga ee Geekbench 4, intee in le'eg ayey sii soconayaan.
Fiidiyowyadan waa inaan u tixgelino iyaga xiisaha halkii aan ka heli lahayn caddayn dhab ah. Waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho iPhone badan oo xaalado badan oo kala duwan ah si aad u soo gabagabeyso haddii macruufka 11.3 uu si dhab ah u isticmaalo batteriga. Weli, eFiidiyowgu wuxuu muujinayaa sida dhammaan iPhone-yada, iyada oo aan laga reebin, ay horay u damiyaan macruufka 11.3, inkasta oo farqiga u dhexeeyaa daqiiqado.
Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ayaa ah, sidii la filayay, iPhone 8 waa midka ugu waqtiga dheer jira. Si kastaba ha noqotee, Waa iPhone 6S ee ma aha iPhone 7 kan labaad ee ugu waqtiga dheer socdaa ee iOS 11.2.6, laakiin leh iOS 11.3 iPhone 7 ayaa labaad ah.
Imtixaanka dhexdiisa ma isticmaalaan nooc kasta oo "Plus" ah. Haddii aad isticmaasho iPhone 5S (ceeb maaha iPhone SE) waxay ka fiicnaanaysaa nolosha batteriga marka loo eego iPhone 6.
Aragtidayda shaqsiyadeed, ee leh iPhone 7 Plus, Waxaan ogaaday in waxqabadka batteriga uu ku fiicnaaday noocyadii hore ee iOS 11. Iyadoo la adeegsanayo macruufka 11.3 weli ma aanan dareemin wax farqi ah, mid wanaagsan iyo mid xun midna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 11 » Isbarbardhiga nolosha batteriga ee iOS 11.3 vs iOS 11.2.6 ee fiidiyowga
Maqaalka waxaad ku tiraahdaa ios11.3 midka labaad ee ugu dheer soconaya waa iphone 7 marka fiidiyowga uusan ahayn sidaas, waa 6da, runtiina marka loo eego isbarbardhiga batteriga wuu ka sii darayaa iyo halbeegga sidoo kale.
Salaan! Jadwalka isbarbardhiga ugu dambeeya wuxuu ku sheegayaa sida iPhone 7 uu u leeyahay "waqti" oo ah 2 saacadood iyo 51 daqiiqo oo leh iOS 11.3. IPhone 6S wuxuu leeyahay 2 saacadood iyo 47 daqiiqo, taas oo ka yar.
Miiska ayaan mar labaad eegay mana arko meesha qaladka aad kahadleyso uu yaalo. Haddii aad sifiican iigu sharaxdid oo ay ii soo baxdo inaan khalad ku arkay, waan saxaa, dabcan.
Walaalayaal waa salaaman tihiin, waxaan haystaa iPhone SE oo leh iOS 11.3 waa waalli inta batteriga ka daata. Ugu yaraan 3 jeer maalintii waan ka qaadaa. Haddii ay ahayd inaan waqti ku cabiro ciyaar, 40 daqiiqo gudahood Asphalt 8 waxay baabi'ineysaa dhammaan baatariga. Iyada oo ah 11.2 ayaan ku soo dallaci lahaa waqti ka waqti, ugu badnaan laba jeer maalintii.
Ku jawaab Andres Arellano